Warar lagu kal soon yahay oo ayaa muujinaya in dowlada Soomaaliya oo dhawaan dhul cusub siisay safaarada Maraykanka, laga dhisaayo halka uu ku yaallo masjidka Cabdicasiis oo dhisanaa in ka badan 500 oo sanno.
Masjidka Cabdicasiis ayaa dhawaan waxaa lagu sameeyay burburin iyadoo dadka loo sheegay in dayactir lagu sameenaayo masjidka, balse waxaa la ogaaday in masjidka laga dhisaayo halka uu ku yaallo safaarada cusub ee Maraykanku ka dhisaayo Muqdisho.
Xildhibaan Maxamed Axmed Kulalihi kana tirsan baarlamaanka Mahiiga! ayaa dhawaan ka sheegay fadhi uu lahaa baarlamaanka, wuxuu sheegay in dowladda ay dhul ahaan u siisay mid ka mid ah raadadka Soomaaliya lagu yaqaan ee wali muuqday, balse dhawaan la baabi’yay.
“Waxaan rabaa in maanta halkan aan ka sheego in dowladdu ay gashay fal dambiyeed aad u culus masjidkii Cabdicasiis ayaa waxaa dhul ahaan loo siiyay halka uu ku yaallo Maraykanka oo safaarad ka dhisanay” ayuu yiri xildhibaan Kulalihi.
→ MAQAAL:- Qormadii uu DONALD KIPKORIR soomaalida ugu gafay, dhulka Soomaaliyeedna Kenya iyo Itoobiya u kala qeybiyay oo Af-Soomaali lagu turjumay – By Aden Colujoog